အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ရက်နာပြင်းထန်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမျိုးရိုးဗီဇဖြစ်စေခြင်းငှါ” လီအဒမ်ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com သောကြာနေ့ 12 ဒီဇင်ဘာလတွင်အပေါ်များအတွက် 2014 06.30 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ရှေ့ဆက်ပါတီရာသီနှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ကိုများစွာသောရုံးခရစ္စမတ်ပါတီမှာထူးဆန်း tipple အတွက်လုပ်ကြသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူသောက်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးပျော်မွေ့လိမ့်မည်. သို့သော်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအချို့ကိုလာမည့်နံနက်ကြောက်စရာ feeling နိုးထကြပါ, အခြားသူများကိုစသညျ့ဖွငျ့ထင်ရသောထိခိုက်နေ? နယူးသုတေသနလုပ်ငန်းကျနော်တို့နောက်နေ့တစ် debilitating ရက်နာခံစားရှိမရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှုခံရနိုင်ကြောင်းအကြံပြု.
ဒီနှစ်မှာတော့ရက်နာသုတေသနလုပ်ငန်း၏လယ်ပြင်တွင်အချို့သောအုတ်မြစ်ချခြင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အလုပ်မွငျဖူး, သိပ္ပံပညာရှင်များအရက်-related ရက်နာ၏အတှေ့အကွုံမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ DNA ကို၏အလှူငွေစုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့်အတူ. ဒီလူတချို့ Hangover ဖို့ပိုကျရောက်နေတဲ့ဘာနားလည်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီစေခြင်းငှါ,, အခြားသူများကဆငျးသကျမီညပြီးနောက်နံနက်ကြမ်းတမ်းသောခံစားမှကြွလာသောအခါ "ဟာကျည်ဆံရှောင်" ရန်ထင်ရစဉ်.
အများကြီးသုတေသနလုပ်ငန်း အရက်မူးယစ်ပေါ်မှာငါတို့အမွေဆက်ခံဇီဝဗေဒ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလေ့လာခဲ့သည်, နှင့်အရက်အလွဲသုံးစားလုပ်ဘို့ငါတို့စွန့်စားမှု. မျိုးဗီဇသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေနှင့်အတူအပြန်အလှန် (သက်တူရွယ်တူအရက်အသုံးပြုမှုနှင့်တူသောအရာတို့ကို, သို့မဟုတ်အရက်ရရှိနိုင်မှု) ကျွန်တော်တို့ကိုမသောက်ဘယ်လောက်သြဇာလွှမ်းမိုးရန်, နှင့်အရက်အပေါ်မှီခိုဖြစ်လာမှကျွန်တော်တို့ရဲ့လွယ်ကူစွာထိခိုက်. ဒီနှစ်မှာတော့ရက်နာအပေါ်မျိုးရိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှုကိုင်တွယ်ရန်ပထမဦးဆုံးလေ့လာချက်များ၏ထုတ်ဝေရန်သည်ကိုမြင်, နှင့်အချို့သောအံ့သြစရာတွေ့ရှိချက်ရှိကြ၏.
နှစ်ဦးလေ့လာမှုများအမွှာ၏စွမ်းအတွက်ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေး, ပေးထားသောအပြုအမူမှမျိုးဗီဇနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေရဲ့အလှူငွေပွလြော့များအတွက်ရေပန်းစားနည်းလမ်း. အမွှာ '' ရက်နာအတွေ့အကြုံတွေကိုအတွက်ကွာခြားချက်များသည် non-အမွှာသူတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြသည်. ထိုအမွှာသူတို့ရဲ့ဗီဇ၏အားလုံးမျှဝေ non-အမွှာသာတဝိုက်မျှဝေကတည်းက 50% သူတို့ရဲ့ဗီဇ၏, ထိုအမွှာအတွက်ရက်နာအတွေ့အကြုံအပြောင်းအလဲအတွက်လေ့လာမဆိုကွဲပြားခြားနားမှုကိုမျိုးဗီဇ၏ရလဒ်အစားထက်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ယူဆနေကြပါတယ်.
ပထမဦးဆုံးအလေ့လာချက် အတွက်စုဆောင်းဒေတာလေ့လာ 1972 ကနေ 13,511 အထီးဒုတိယကမ်ဘာစစ်ဝါရင့်အမွှာ. အဆိုပါအမွှာရက်နာ၏အတှေ့အကွုံကိုဆုံးဖြတ်ရန်လွန်ခဲ့သောနှစ်ကာလ၌မိမိတို့သောက်သုံးရေနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်, ထိုကဲ့သို့သောမကြာခဏဘယ်လိုသင်အမှန်တကယ်မူးယစ်ဖြစ်လာပါဘူး "အဖြစ်?"နှင့်" မကြာခဏဘယ်လိုသင်တစ်ဦးရက်နာကြပါဘူး?". အဆိုပါသုတေသီများသည်အရက်သေစာမူးယစ်၏ heritability ပတ်ပတ်လည်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရ 50%, နှင့်ရက်နာခဲ့ 55%. ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် Hangover ၏အတှေ့အကွုံသိသိသာသာဗီဇလွှမ်းမိုးမှုကြောင်းအကြံပြု, မျှဝေမသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေနှင့်အတူ (အရက်ဖို့ဥပမာ access ကို) ထိုအပြောင်းအလဲ၏ကျန်များအတွက်စာရင်းကိုင်.
သို့သော်, စဉ်းစားရန်အချို့သောအမှုအရာသည်ဤရလဒ်များအနက်ထဲမှာရှိပါတယ်. သင်တန်းသားများကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင်အဘို့မိမိတို့အရက်မူးယစ်နှင့်ရက်နာအတှေ့အကွုံသတင်းပို့ဖို့တောင်းခဲ့ကြ. မည်သူမဆိုတိကျစွာသူတို့အတိတ်ကျော်အရက်မူးသို့မဟုတ် hungover ဖြစ်ခဲ့သောရက်နေ့တွင်အခါသမယ၌ရှိသမျှသတိရနိုင်မှာမယ်လို့စိတ်ကူးရန်ခက်ခဲသည် 12 လများ. ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုလည်းသာအဖြူယောက်ျားစုဆောင်းထို့ကြောင့်ရလဒ်တွေအမျိုးသမီးတွေသို့မဟုတ်အခြားတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများမှယဘေုယမပြုစေခြင်းငှါ. ထို့အပြင်, စက္ကူအရက်မူးယစ်နှင့်ရက်နာအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါအခြားအချက်များများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆနျးစစျမပါဘူး, ဥပမာလက်ရှိနာမကျန်း (သင်တန်းသားများကိုစမ်းသပ်ခြင်း၏ထိုအချိန်ကအသက်ကြီးအလယ်ခဲ့ကြ), စိတ်ဖိစီးမှု၏အတှေ့အကွုံ, အခြားမည်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု (ထိုကဲ့သို့သောနီကိုတင်းအဖြစ်).
ပိုများသောယေဘုယျအားဖြင့်, ရက်နာသုတေသီများရက်နာခြင်းရဲ့အဓိပ္ပါယ်အတိုင်းအတာအပေါ်သဘောတူရန်ရှိသေး. မကြာမီက သုတေသနလုပ်ငန်း တစ်ဦးဆီးနမူနာကို အသုံးပြု. စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်ရက်နာ၏အတှေ့အကွုံမှဆက်စပ်ဇီဝအမှတ်အသားများဖော်ထုတ်ခဲ့သည်, ဤအနမူနာ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစျေးကြီးနှင့်အချိန်စားသုံးနိုင်ပါတယ်သော်လည်း.
ဒုတိယလေ့လာမှု အရက်ရက်နာအတော်ကြာအစီအမံအပေါ်မျိုးရိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှုလေ့လာ (ကြိမ်နှုန်း, ခုခံရေးနှင့်လွယ်ကူစွာထိခိုက်) တွင် 4,496 ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအမွှာ. ရလဒ်များမျိုးရိုးဗီဇအချက်များအဘို့မှတ်ကြောင်းညွှန်ပြ 45% ရက်နာအကြိမ်ရေအတွက်ခြားနားချက်၏ (ဘယ်လောက်နေ့ရက်များစွာအတိတ်နှစ်တွင်သင်တို့အရက်သောက်ပြီးနောက်နေ့ကိုကောင်းစွာမခံစားရဘူး) ယောက်ျားနှင့် 40% အမျိုးသမီးအတွက်, in line with the previous study.
စိတ်ဝင်စားစရာ, this study further shows that the heritability of hangover resistance (having no hangover the morning after being drunk) is around 43%, regardless of gender. This suggests that our genes may contribute to our ability to drink alcohol without falling victim toaterrible hangover. This is an important finding given that individuals who showareduced response to alcohol intoxication (they need more alcohol to get drunk) may be at greater risk for alcohol dependency. Resistance to hangover may also be an important indicator of increased risk.
As with the other study, this research relied on self-reported measures of hangover over the past year and the accuracy of this type of assessment is questionable. ထို့အပြင်, the authors were not able to measure other factors which may influence experience of hangover, such as how they respond to alcohol (how many drinks it takes to feel drunk) and whether they are unable to control their drinking.
Together these studies suggest that our likelihood of experiencingahangover afteranight of drinking is partly genetically influenced. ထို့အပွငျ, the reason why some individuals can appear to drink endlessly and not wake up withadreaded hangover while others cannot is also in part determined by our inherited biology.